Golaha wakiillada Puntland oo la kulmay guddiga KMG ah ee golaha shacabku u diray sixidda xeerka doorashooyinka – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland oo la kulmay guddiga KMG ah ee golaha shacabku u diray sixidda xeerka doorashooyinka
Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo xubno ka ah guddiga uu goluhu u saaray dib u eegista xeerka doorashooyinka ee xukuumaddu soo diyaarisay ayaa la kulmay guddoonka golaha wakiillada Puntland.
Xubnaha guddiga ayaa maanta yimi Garowe.
Gudoomiyaha golaha wakiilladda Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed wuxuu sheegay in guddiga ay kulan soo dhowayn iyo kala warqaadasho ah yeesheen isla markaasna ay la wadaageen qaybaha uu ka kooban yahay xeerku.
Xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha wakiillada Puntland qaarkood ayaa kulanka ka qayb-galay.
Xubnaha guddiga ayaa wada-tashiyo la yeelanaya hab-dhismeedka iyo jaan-goynta xeerkan oo loogu talagalay doorasho qof iyo cod ah, taas oo xilligan daneeyayaasha siyaasaddu ay walaac weyn ka muujinayaan suurtagalnimadeeda.
Dowladda Puntland ayaa ka digtay in xeerkan uu golaha shacabku meel-mariyo markii la horgeeyay kalfadhigii shannaad, maadama aan wada-tashiyo fidsan laga siin dhinacyada ay khusayso. Guddoonka golaha shacabka ayaana xeerka u saaran guddigan gaarka ah.
Sababaha ka dambeeya dhismaha Guddiga Sugidda Cunnada iyo Nafaqada ee Baarlamaanka
Senatar Abshir Bukhaari oo boggaadiyay daahfurka maktabad laga hirgeliyay deegaankii laga soo doortay